Fitohizan'ny hafatra : Ka tena TSY takatr'i Gasy1zay (Kristiana) akoriny ...
rhaj0 - 11/06/2018 16:17
Ka tena TSY takatr'i Gasy1zay (Kristiana) akoriny izany hoe, Inona ny (isan'ny) fanakianana ataon'ny Moslimo sy ny Jiosy an'ireo Kristiana, izay rahalahy sy rahavaviny ao @ Andmntr'i Abrahama eee...
Izao indray azany ee... mba fanontaniana indray ity:
Inona ny (isan'ny) fanakianana ataon'ny Kristiana indray @ Moslimo sy ny Jiosy, izay rahalahy sy rahavaviny ao @ Andmntr'i Abrahama??
Satria dia mahavalalanina eee... Maninona no mifanakiana sy mifanebaka nareo, samy taranak'i Abrahama, na koa, samy taranak'i Adama sy Eva HONO, ary samy "mivavaka", dia samy mihambo ho "bitsihin'izao Andmntr'i Abrahama izao" HONO.
Sa kosa, TSY ny Andmtr'i Abrahama no Andrmntrareo Kristiana?
gasy1zay - 11/06/2018 21:56
Ny tsy mampitovy fijery azy 3 ireo re ry rhaj0 dia ny lehibe indrindra : i Jesoa Kristy a!
Ny judaisma dia mihevitra fa tsy zanak'Andriamanitra Jesoa, tsy nintsangana t@ maty izy fa nangalarin'ny mpianany ny fatiny, hatramin'zao ry zareo dia mbola miandry ny mesia ary zay no antony nahatonga ny mpino jiosy maro niverindalana satria ohatrany tsy mety hita ilay mesia nambaran'ny mpaminany.
Ny silamo dia mihevitra fa mpaminany Jesoa, tsy maty hono izy fa "sosie"-ny ilay nohomboina t@ hazo fijaliana, fa nampiakan'i Allah tany andanitra tao amin'ny mangingina izy, tsy mino koa ny silamo hoe zanak'Andriamanitra Jesoa ary tsy mino ny Fanahy Masina koa ry zareo.
Ny kristiana dia mino fa efa tonga ilay mesia ary i Jesoa Kristy no izy, efa vita ny famonjena fa dia raisina ampinoana sisa. Mino ny kristiana fa efa nintsangana tamin'ny maty i Jesoa ary mitoetra eo ankavanan'Andriamanitra Ray, ny kristiana mino fa mitoetra ao anatiny Jesoa amin'ny alalan'ny Fanahy Masina.
Ny tsy mampitovy azy manaraka dia ny fomba ahazoana famonjena ( fianana mandrakizay) :
1- Judaisma = manaraka 100% ny lalan'i Moizy
2- Silamo = manao ny tsara > manao ny ratsy
3 Kristiana = mino sy manaiky an'i Jesoa Kristy ho Tompo sy mpamonjy
rhaj0 - 11/06/2018 22:07
msaotra ee.. hafa mihintsy ho'a rehefa nareo ry Gasy1zay no miteny azy aaa..
rhaj0 - 12/06/2018 19:54
Raha azaoko tsara izany, dia - ny Jiosy "manaja ny lalan'i Mosesy" - ny Silamo "manao ny tsara", hozy Gasy1zay. Ataoko fa manao ireo koa ny Kristiana. Ary miankohoka @ Andriamanitr'i Abrahama daholo ny rehetra ireo
Fa ny olana izany dia i Jesosy.
- Ny nataon'i Jesosy,
- ny vavan'i Jesosy sy izay Fampianarany ao,
- ary ny fi-considérer-na an'i Jesosy,
ireo no olana
I Jesosy no antony hisaratsarahan'ny zanak'Andmntr'i Abrahama, izay misaratsaraka ho Jiosy sy Moslimo ary Kristiana izao io.
Afaka hitarina ny fijery, ka dia azo lazaina hoe, i Jesosy izany no "mahatonga ny fanafintohinana" (an'ny Jiosy sy Moslimo).
Raha izay, dia ahoana ilay hoe "loza ho an'izay iavian'ny fanafintohinana!"
gasy1zay - 13/06/2018 16:49
Efa nisy faminaniana momba an'io tokoa ry rhaj0 a:
Sal 118:22 Ny vato izay nolavin’ ny mpanao trano No efa tonga fehizoro Indrindra
1Petera 2 : 6 Fa misy teny ao amin’ ny Soratra Masina manao hoe: "Indro, mametraka fehizoro ao Ziona Aho, dia vato voafidy sady tsara; Ary izay mino Azy tsy ho menatra".
7 Koa ny fahatsarana dia ho anareo izay mino; fa amin’ izay tsy mino kosa "Ny vato izay nolavin’ ny mpanao trano No efa tonga fehizoro",
8 "Ary vato mahatafintohina sy vatolampy mahasolafaka"; ary satria tsy nanaiky ireo, dia tafintohina tamin’ ny teny izy, sady izany koa no nanendrena azy.
9 Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, "fanjakà-mpisorona, firenena masina", olona nalain’ Andriamanitra ho an’ ny tenany mba hilazanareo ny hatsaran’ Ilay niantso anareo hiala tamin’ ny maizina ho amin’ ny fahazavany mahagaga;
rhaj0 - 13/06/2018 18:06
Asiavo fandinihina ihany ry Gasy1zay rahefa mitsindroka toko aman'andininy ao @ Baiboly ao aa..
Iza, hozy i Gasy1zay no nanoratra ny 1 Petera??
Vakio anie ny ato ee..
Ataovy ny devoaranao ry Gasy1zay aa... Dia ho takatrao mora fotsiny fa "Peter Paul manamarina Peter Paul" ny resaka ao. Dia halalino tsara ao, dia ho takatrao koa fa TSISY "bitsik'Andmntra", averiko ihany, TSISY "bitsik'Andmntra" izany ireto resaka eto @ 1 Peter sy izay Episitilin'i Paoly hafa rehetra, fa tena politikam-Paoly sy Petera rano fotsiny.
Fa raha hanao oye-oye tsy am-piheverana sy tsy am-pandinihina indray ve moa i Gasy1zay, dia ... tairo ho'a fa izaho indray ve hanakana anao tsy hanao an'iznay
gasy1zay - 13/06/2018 18:35
Ilay faminaniana resahina anie efa voasoratra tao amin'ny salamo e!
ary voalaza koa ao amin'i matio 21:42 Hoy Jesosy taminy: Tsy mbola novakinareo va ny teny ao amin’ ny Soratra Masina hoe: Ny vato izay nolavin’ ny mpanao trano, Dia izy no efa natao fehizoro; Avy tamin’ i Jehovah izao Ka mahagaga eo imasontsika
vakio tsara ny Matio fa Jesoa no ambara eto ary ny mpanorandalana izay mahalala ny Soratra Masina tamin'izany dia tonga saina hoe izy no resahiny : Ary nitady hisambotra Azy izy ireo, nefa natahotra ny vahoaka izy, satria fantany fa ny tenany no nolazainy tamin’ izany fanoharana izany; dia nandao an’ i Jesosy ny olona ka lasa
Lioka : Ary Jesosy nijery azy ka nanao hoe: Ahoana moa izao voasoratra izao: Ny vato izay nolavin’ ny mpanao trano, Dia izy no efa natao fehizoro?.
Asan'ny apostoly : dia aoka ho fantatrareo rehetra sy ny olona Isiraely rehetra fa ny anaran’ i Jesosy Kristy avy any Nazareta, Izay nohomboanareo tamin’ ny hazo fijaliana, fa natsangan’ Andriamanitra tamin’ ny maty kosa, dia Izy no itsanganan’ io lehilahy io finaritra eto imasonareo.
11 Ity no vato izay nolavinareo mpanao trano, nefa tonga fehizoro.
12 Ary tsy misy famonjena amin’ ny hafa; fa tsy misy anarana hafa ambanin’ ny lanitra nomena ny olona izay hahazoantsika famonjena.
rhaj0 - 13/06/2018 18:56
RAha ny 1 Petera (sy ny Asan'ny Apostoly) aloha dia efa kôpy (angamba) i Gasy1zay fa propagandy daholo izany ee.
Fa ilay Matio 21:42, dia tena niverenako vakiana kely ny contexte-n'ny tantara tao. Ny tohiny ao @ 21:43 izao dia hoe:
ka inona no idiran'ny Moslimo/Jiosy @ io fantsin'i Jesosy o @ 21:42 io hoe ry Gasy1zay fa tena tsy takatro ny rirotr'elastikanao izany
gasy1zay - 13/06/2018 20:06
Vakio tsara le parabole nataon'i Jesoa rhaj0 a!
Lehilahy tompontrano = Andriamanitra Ray
Taninmboaloboka = ny tany
Voaloboka = ny olona hovonjena
Olona mpiasa = Mpanorandalana sy fariseo (mpitondra fivavahana)
Mpanompony = mpaminany
Zanany lahy tokana = Jesoa
Tsy vitany hoe nanda an'i Jesoa ireo fa namono azy ho faty mihintsy, dia nesorina taminy ny fitoriana ny famonjena fa nomena ny mpianatr'i Jesoa, ary tsy navela hoan'ny fierenena Jiosy irery ny famonjena fa nomena ny firenena manerantany satria ry zareo nanda an'i Jesoa, tsy nino izy hoe Jesoa no Mesia , dia zay no nahatafintohina azy ary miverina amin'ilay hoe vato nolavin'ny mpanao trano tonga fehizoro
rhaj0 - 13/06/2018 21:09
Ka ny Kristiana izany tonga dia nanondro-tena ho "mpanompony". Maninona tokoany moa tsy tonga dia maka ny "rôle".
Ary ny Kristiana tonga dia nanondro ny Jiosy sy Moslimo ho "mpiasany". Maninona tokoany moa tsy tonga dia tondroina ho "bandy" ireny.
Ary dia ho "torotoro" sy ho "mongomongo" HONO izany ireto "mpiasany".
Izay izany ilay izy an?
Entre-pa fa tena manja ilay fantsin'i Jesosy iray ity, apetrako eto sao hadino:
Matio 31... Lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga efa mialoha anareo ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. 32	Fa Jaona nankany aminareo tamin'ny làlan'ny fahamarinana, nefa tsy nino azy hianareo; fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga no nino azy
Hi hi hi.. ka (mety) dépasser-n'ny mpamory hetra sy vehivavy janga HONO nareo izany ry Gasy1zay aa.. Na mamory hetra sy janga azany ireo, rehefa "nino azy" fotsiny dia basy ee... Izay ilay "minou fotsy" (SOLA FIDE, faith alone).
gasy1zay - 13/06/2018 22:25
i Matio anie ilay mpamory hetra resahiny teo ry rhaj0 e! Aiza ho aiza no misy azy noho ny nino izy? Mbola nanangona hetra ve?
ny finoana no mamonjy, marina izany, fa rehefa manaiky an'i Jesoa ho Tompo sy Mpamonjy ianao dia miova amin'zay fa tsy mijanona amin'ny fanaonao taloha, tsy misy olana amiko mintsy ny mpamory hetra sy vehivavy nibebaka ka lasa kristiana ry rhaj0 a! Ianao sisa no andrasana e!
rhaj0 - 14/06/2018 14:48
ntss... i Matio ve no mitantara nanoratra ny boky, dia lazain-dry Gasy1zay indray fa i Matio no resahin'i Jesosy ao anaty tantara?
Dia i Jesosy en personne mihintsy koa ve no milaza fa "vehivavy janga no nino azy", ary izay no nampalasa azy "mialoha lalana", dia tonga diaa lazain-dry Gasy1zay comme ça @ izao fa "nibebaka" ilay vehivavy janga?
Manidina mihintsy ny imazination-n'ny zaza ao @ garabola an.. Dia tena mila manoratra "baiboly arak'i Gasy1zay" mihitsny i Gasy1zay fa tena ... hafa mihintsy ilay an'i Gasy1zay eee..
endriny - 14/06/2018 15:01
Fa ilana Atra ve mahalala manao ny tsara?
Asa kalongany fa na ny baiboly aza dia nilaza fa tsy nahalala ny tsara sy ny ratsy ny olona raha tsy nihinana ilay paoma.
Ka hitantsika izany fa hatrany amboalohany ny fanapena-maso nataon’Atra sy izay niaraka taminy.
Taty aoriana dia voatapi-maso foana ireo nanaraka an’Atra. Hany ka na dia voasoratra ho lalana aza ohatra ny hoe aza mamono olona, dia tsara ny mamono olona rehefa Atra no manao izany sy ireo mpiaradia aminy.
Eto dia indramiko kely ilay tenin’i Gasy1zay hoe: Tsy misy aretina tsy sitran’Atra. Eny tokoa, tsy misy aretina tsy sitrany saingy iniany tsy sitranina, satria mahafinaritr’Atra ny mahita ny olona mitsipaka.
gasy1zay - 14/06/2018 15:48
rehefa tsy mahatoky ny ambarako rhaj0 dia aleo ndray mba zaraina ny fijery neutre :
raha tsy tian'i rhaj0 ndray ary i Matio dia nisy mpamory hetra 1 koa hoe Zakaiosy no anarany, ary dia tena nibebaka koa zany lehilahy zany ary nanonotra ny tsolotra nalainy.
ka io hoa ry rhaj0 mino ianao dia vonjena saingy rehefa manaiky an'i Jesoa Kristy ho Tompo ianao dia midika hoe vonona ny hiova fa tsy hoe mbola ilay rhaj0 atheista ihany no rhaj0 hiova fo
rhaj0 - 14/06/2018 17:03
"mpamory hetra" en général re ry Gasy1zay no lazain'i JEsosy aaa... "vehivavy janga" en général koa.. Sa hilaza koa i Gasy1zay, fa i Maria Magdalena no tiany lazaina @ io "vehivay janga" io, fa i JEsosy mantsy, tsy mba olona franc sy direct, dia miolakolana sy mi-parabola lava foana HONO?
Fa TSy mety takatr'i Gasy1zay koa anie ny fampianaran'i Jesosy ee.. Efa lazain'i Jesosy mazava beuh io hoe, "fa nino Azy" no nampa-avotra ny mpamory hetra sy ny viavy janga, dia valanin-dry Gasy1zay indray ny tenin'i Jesosy, dia amoromoporonan-dry Gasy1zay hoe, "nibebaka" hono iretsy olona.
Hitsakitsaho sy valambalano hoana ho'a ny fampianaran'i JEsosy direkta ry Gasy1zay, dia amoromporony resaka hafa eo amboniny ee..
Izaho indray ve ho'a no hanakana anao tsy hanao izany re ry Gasy1zay
gasy1zay - 14/06/2018 22:40
ka nareo anie rhaj0 mitsimpona andinin'ny soratra masina dia ohatrany hoe nareo no tena tompon'ny voasoratra ao e!
Nino ny nambaran'i Jaona mpanao batisa no lazaina eto, eny sa tsia?
Inona ny batisan'I Jaona? batisan'ny fibebahana re ry rhaj0 a!
1 Ary tamin’ izany andro izany dia niseho Jaona Mpanao-batisa, nitory tany an-efitr’ i Jodia nanao hoe:
2 Mibebaha hianareo; fa efa akaiky ny fanjakan’ ny lanitra.
ka raha nino an'io ve ry zareo dia azo lazaina hoe nibebaka sa tsia?
rhaj0 - 15/06/2018 13:17
hi hi hi... dia hita mihintsy fa Kristiana ry Gasy1zay. Ary dia nohitariny ny elastika ee..
gasy1zay Jaona Mpanao-batisa, nanao hoe: 2 Mibebaha hianareo
=== batisan'ny fibebahana ===
parallèle lojika-ngasy1zay Rajaona mpisotro-toaka nanao hoe: asio masikita n'enareo.
=== toakan'ny masikita ====
na dia tsisy azany ny vola (hividianana masikita) fa efa lasan'i RBNIR ny 1/10-karena
gasy1zay - 15/06/2018 15:45
dia ahoana zany ny famakin'i rhaj0 an'ity voasoratra ity :
Mar 1:4 dia niseho Jaona, izay nanao batisa tany an-efitra ka nitory ny batisan’ ny fibebahana ho famelan-keloka
rhaj0 - 15/06/2018 17:06
Ka batisa sy batisan'ny fibebahana zavatra hafa. Raha tsy diso aho, i Jesosy koa voan'io.
Fa ny fampianarana direkta an'i Jesosy (taty aoriana), dia
Matio 31... Lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga efa mialoha anareo ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. 32	(...) fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga no nino azy
1- efa vita batisa daholo na mpamory hetra na vehivavy janga.. EN GENERAL.
2- fa ilay "nino azy" no mahazo avance. Ireo "tsy nino azy" kosa dia any ny tranony.
Efa hoe mpamory hetra koa i Matio, fa raha akapokao Maria Magdalena koa no ilay vehivavy janga, dia ... raha arak'i Gasy1zay izany, dia toatoa izao HONO no tian'i Jesosy lazaina
Matio-@-lojika-ngasy1zay : .. Lazaiko aminareo marina tokoa fa i Matio sy i Madgalena efa mialoha anareo ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Tsy mankarary ny lavakao ve ry gasy1zay ny mandroritra elastika lava ao?
gasy1zay - 15/06/2018 17:43
ka i rhaj0 anie manafangaro zavatra dia ohatrany hoe izay namana mba manampy azy no mandrirotra ny voasoratra e!
Vakio ny baiboly fa mazava be ny voasoratra ao rhaj0 a!
tsy nisy batisa afatsy ny batisan'i Jaona izay batisan'ny fibebahana talohan'ny nanirahan'i Jesoa ny mpianany hoe :
Mat 28:19 koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin’ ny anaran’ ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina
Teo vao nisy batisa kristiana,
ka raha vita batisa ny olona talohan'io ( na mpamory hetra na vehivavy janga na olonkafa) dia batisan'ny fibebahana izay no natao taminy = olona efa nibebaka izy zany ( cqfd)
fa tsy azoko hoe inona ny probleman'i rhaj0 raha voavonjy ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga, za anie tsy manda hoe voavonjy izy e! fa miteny aho hoe efa ninebaka izy azy azo hamarinina tsara fa tena niova fo izy ireo, raha tsy tian'i rhaj0 ny fiovan'i Matio dia ito ndray ary e :
ka niova( nibebaka) ve ry zareo sa tsia?